बेलायतमा सरस्वती पूजा र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम
अमृत गर्बुजा -
लन्डन । पुन मगर पुर्ख्यौली समूह बेलायत र धौलागिरि नौमती बाजा समूह बेलायतले संयुक्तरुपमा सरस्वती मातालाई पूजा गरेर नेपालको आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउने र निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन् ।
सरस्वती पूजा बेलायतको फार्नबरोस्थित कम्युनिटी हलमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा सभापतित्व पुख्र्यौली समूह तथा नौमती बाजा समूहका वर्तमान अध्यक्ष बिल पूर्जा पुन मगरले गरेका थिए । कार्यक्रम उद्घाटन भूपू सांसद म्याग्दीका नरबहादुर पुनमगरले गणेशको पानसमा र ज्येष्ठ नागरिक कृष्णबहादुर पुन मगरले सरस्वतीको पानसमा दीप बालेर गरेका थिए । त्यस क्रममा धौलागिरि नौमती बाजाले नगरा बजाएर हर्षोल्लास बनाएको थियो ।
सरस्वती पूजा किन गरिन्छ ? कसरी गरिन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा कार्यक्रमका सभापति बिल पूर्जा पुन मगरले प्रकाश पारेका थिए । त्यसलगत्तै पूजापाठको सुरु गरिएको थियो ।
विशेष अतिथिको रुपमा पर्वत वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष दधी आचार्य उपस्थित थिए । अन्य अतिथिहरुमा एनआरएनए युकेका अध्यक्ष योगकुमार फगामी, म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ युकेका उपाध्यक्ष खिम शेरचन, पुन मगर समाज युकेका अध्यक्ष तेज राम्जाली पुन मगर, नमस्ते ट्राभलका प्रोप्राटर अर्जुन तिलिजा, समाजसेवी अंग गर्बुजा, मगर संघ युकेकी उपाध्यक्ष अनिता राना मगर, मगर संघ युकेका महासचिव, लाल पुन मगर, सचिव खगेन्द्र, मगर संघ युकेका उपाध्यक्ष सीता पूर्जा, पुन मगर, मगर संघ युकेका सांस्कृतिक विभाग प्रमुख तथा पुन मगर संघ युकेका महासचिव तुलचन्द्र तिलिजा पुन मगर, भू.पू. अध्यक्ष मोना युकेका रेशम शेरचन, मोना युकेका महिला उपाध्यक्ष लीला गर्बुजा पुन, एभरेष्ट आर्चरी क्लबका सचिव ओबिन पुन, भू.पू.अध्यक्ष बेल बुढाथोकी, पुन मगर समाज, युकेका महिला अध्यक्ष अम्बु पुन मगर, मगर संघ युकेका कुमारी गुरुङ साथै लोकदोहोरी गायिका कल्पना गुरुङलगायत उपस्थित थिए ।
हल बुक गर्ने र हल सजावट गर्ने जिम्मा धौलागिरि नौमती बाजा समूहका संयोजक रन पाइजा पुन मगरले लिएका थिए । पूजाको सम्पूर्ण सामग्रीहरु पुर्ख्यौलीसमूहका अध्यक्ष तथा धौलागिरि नौमती बाजाका अध्यक्ष बिल पूर्जा मगरका श्रीमती मिनकुमारी पूर्जा मगरले जुटाएकी थिइन् । साउन्ड सिस्टम वा डीजे सिस्टमको व्यवस्था पुन मगर समाज, बेलायतका वर्तमान अध्यक्ष तेज राम्जालीले गरेका थिए भने पेय पदार्थको जोहो गर्ने काम नौमती बाजा समूहका सक्रिय सदस्य तथा सनाहीका रागी भीम थापा मगरले गरेका थिए ।
त्यसैगरी सरस्वती पूजाको लागि चोखो रोटी पोलोको व्यवस्था गीता पाइजा र बबी पाइजा मगरहरुले गरेका थिए । पूजा र प्रसादको लागि खीर समाजसेवी नीरा पीजीले गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको लागि खानाको व्यवस्था काठमान्डू कुजिनका प्रोप्राईटर खगेन्द्र पूर्जा मगरले गरेका थिए भने अन्य कामको लागि थुप्रै सहयोगी हातहरुले साथ दिएकोले कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा पुन मगर पुर्ख्यौलीसमूह बेलायतका अध्यक्ष बल पूर्जा मगरले उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वास्थ्य र सुरक्षाको निम्ति गर्नु पर्ने क्रियाकलाप र सजकताबारे अवगत गराएका थिए । कार्यक्रममा स्वागत भाषण पुर्ख्यौलीसमूहका अध्यक्ष बल पूर्जा पुन मगरले गरे भने सञ्चालन धौलागिरि नौमती बाजा समूहका सचिव अमृत गर्बुजा र तेज राम्जालीले गरेका थिए ।
दोश्रो चरणमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम राखिएको थियो । कार्यक्रममा लोकदोहोरी गायिका कल्पना गुरुङ, तुलचन्द्र तिलिजा, लीला गर्बुजा, तारा पूर्जालगायतले धौलागिरि नौमती बाजाको तालमा गीत गाएर भरपूर मनोरञ्जन दिलाएका थिए ।
विशेषगरी हरेक वर्ष वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वती मातालाई सम्झने र पूजा गर्ने गरिन्छ । यसवर्ष माघ ८ गते र जनवरी २२ मा पर्न गएको थियो । तर, विदेशमा विभिन्न कार्यव्यस्तताको कारणले जनवरी २० मै सरस्वती मातालाई आराधना गरेर भव्यताका साथ मनाइएको छ ।
वसन्त पञ्चमीकै दिन आफ्नो बालबच्चाहरुलाई स्कुल भर्ना गरेर अक्षारम्भ गर्ने परिपाटी पनि छ । आजको दिन सर्जकहरुको दिन पनि हो । सर्जकहरुले सरस्वती मातालाई पूजा गर्दछन् साथै नयाँ सर्जकहरुले पनि आजबाट नै आफ्नो कला र सीपलाई शुभारम्भ गर्ने गर्दछन् । सिर्जनाका औजारहरु जस्ता ः कलम, मसी, पुस्तक, आफूले बजाउने बाजागाजा साथै विभिन्न म्युजिकका सामग्रीहरुलाई सरस्वती माताले विद्या प्रदान गरुन् भनेर आराधना गर्ने गर्दछन् । सर्जकहरु भन्नाले लेखककार, गीतकार, गायककार, रचनाकार, सूचिकार अथवा आफ्नो कार्य क्षेत्र जे मा छ ती सबैजनालाई जनाउँदछ ।
सेतो वस्त्र लगाएर हातमा वीणा र वरदान दिने स्फतिकको मालासहित सुशोभित छिन् । सेतो कमलको फूलमा आसिन ती देवी जसको ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सबैले उपासना गर्छिन् । उनी माता सरस्वतीले हाम्रा अज्ञानताहरुलाई चिर्दै हामीलाई निर्मल विद्या दिन्छिन् ।
सरस्वती वा श्रीपञ्चमी वा वसन्त पञ्चमी विद्या वा संगीतको प्रतिरुप भनेर चिनिन्छ । आजबाट वसन्त ऋतुको शुभारम्भ हुन्छ । आजबाट कोइलीको कुहु कुहु साथै न्यानोपनको सुरुआत हुन्छ । यस ऋतुमा नेपालीहरुको वैदिक संस्कारअनुसार बालीनाली लगाउने औजारहरु साथै हलो, गोरु, माटो, बोट–बिरुवाहरुलाई पनि पूजा गरिन्छ । आजको दिन नेपालको हरेक स्कुलहरुमा सरस्वती पूजा धुमधामका साथ मनाइन्छ । यो वसन्त पञ्चमीलाई मुस्लिम समुदायले पनि सुफी वसन्तका रुपमा १२ औं शताप्दीदेखि मनाउँदै आएको पाइन्छ । यस वसन्त पञ्चमीदेखि आफ्नो व्यवसायी वा पेसा वा कुनै पनि सीप वा बुद्धि निरन्तररुपमा अभिवृद्धि होस् भनि सरस्वती मातालाई पूजापाठ गरिन्छ ।
अन्तमा हल हस्तान्तरण गर्ने जिम्मा धौलागिरि नौमती बाजा समूहका संयोजक रन पाइजा मगरले लिएका थिए । कार्यक्रमको समापन सभापति बिल पूर्जा पुन मगरले गरेका थिए ।